Resadresaka – Blaogin'i Voniary
Rehefa nanao antso fanohanana ara-bola ny Barea volana vitsivitsy lasa izay dia nirohotra ny besinimaro. Misy aza hono nandrotsaka 300 Ar. Fiaraha-misalahy nahavelom-bolo sy nahavelom-panatenana teo amin’ny Malagasy tokoa iny ary nisy vokany tamin’ireo mpilalao satria nanosika azy ireo hanao izay tratry ny heriny. Fotoana hafa, sehatra hafa indray ity saingy miantso ny fanohanatsika ihany... Lire la Suite →
Boky an’arivony, baiboly an-jatony amin’ny teny Malagasy sy fiteny hafa, vola Malagasy sy an’ny firenen-kafa, gazetiboky, hajia sy karazan-javatra maro samihafa no asehon-dRAKOTOMALALA Rivoniaina Rija ao amin’ny Tahala Rarihasina Analakely nanomboka tamin’ny 18 Martsa ka hatramin’ny 28 Martsa ho avy izao. Efa fanaony isan-taona ny fampirantiana toy izao ary andiany fahafolo ity tanterahina ity. Fialamboliny... Lire la Suite →